कतारमा रहेका नेपालीहरु काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ ? अब यसरी सजिलै गर्न सकिन्छ काम परिवर्तन — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । कतारमा तपाई काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ ? यदी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विभिन्न प्रक्रियामार्फत रोजगारदाताको पूर्वअनुमति बिनै पनि काम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँ काम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई ले आफूले काम परिवर्तन गर्न लागेको बारेमा कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयको विद्युतिय माध्यमबाट जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ।
तपाईले दुईवर्ष या दुईवर्षभन्दा कम समयदेखि काम गरिरहनुभएको छ भने एक महिनाको समय अवधि दिएर काम परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्छ । दुई वर्षभन्दा धेरै समयदेखि काम गरिरहनुभएको छ भने तपाईले रोजगारदातालाई दुई महिनाको समय दिएर काम परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्छ ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयको विद्युतिय माध्यममार्फत तपाईले आफूले काम छोड्न लागेको जानकारी विभिन्न कागजात पेश गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ।
हस्ताक्षरसहितको नयाँ करार सम्झौता रोजगारदाताले मन्त्रालयको वेवसाइटमा अपलोड गर्न पर्नेछ । प्रमाणीकरणका लागि रोजगारदाताले ६० कतारी रियाल शुल्क तिर्नपर्छ । जब रोजगार करारसम्झौता प्रमाणीकरण हुन्छ तब नयाँ रोजागरदाताले कतारी आइडीका लागि थप आवश्यक कागजातसहित कतारको आन्तरिक मन्त्रालयमा पेश गर्न पर्नेछ ।
‘अब रोजगारी गुमेकै कारणले नेपालीहरू घर फर्कनु पर्दैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जसको कम्पनी बन्द भएको छ वा रोजगारी गुमेको छ, उसलाई कतार सरकारले नै सीप र दक्षताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।’ करार अवधि समाप्त भएपछि नेपालीहरू नेपाल फर्किन पाएका छैनन् । आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या भएको छ ।
उनीहरूमध्ये घर फर्कनका लागि २१ हजार २ सय २१ जनाले दूतावासमा नाम दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएको राजदूत भारद्वाजले बताए । ‘उहाँहरूलाई नेपाल फर्कन मन छैन र अर्को कम्पनीमा रोजगारी गर्ने इच्छा छ भने यहीं काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । हामीले पनि यो अवस्थामा स्वदेश फर्कनुभन्दा यहीं काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दूतावासले त्यसका लागि आवश्यक कागजात बनाइदिन सहयोग गर्नेछ ।’
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कतारको नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका श्रमिकले निकास पाउने बताए । ‘यो अवस्थामा उनीहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । फेरि रोजगारीका लागि अर्को देशमा जान लाग्ने थप खर्च हटेको छ,’ उनले भने, ‘अब सीपका आधारमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्यो । कतारले मार्चदेखि लागू हुने गरी एक हजार रियाल न्यूनतम तलब तोकेको छ । यसले नेपाली श्रमिकलाई थप फाइदा पुग्नेछ ।
‘हाम्रो श्रम बजारको विशेषता चलायमान छ । दैनिक विदेशबाट जति आउँथे, त्यति नै जान्थे । चैतदेखि नयाँ श्रमिक गएका छैनन्, आउने मात्रै छन् । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगिरहेको थियो,’ गुरुङले भने, ‘बेरोजगारीलाई कतारमै समायोजन खोज्नुले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रमिकको परिवारलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने देखिएको छ ।’